I-Sharm El-Sheikh, iindiza zeLuxor kunye neCairo kwiQatar Airways ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Sharm El-Sheikh, iindiza zeLuxor kunye neCairo kwiQatar Airways ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Sports • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukwanda okuzayo kweenkonzo e-Egypt kuya kuqhubeka nokubonelela abalandeli bebhola base-Egypt iindlela zokuhamba ukuya kwiNdebe yeFIFA yeArabhu ye-2021 eQatar, bonwabele ezona ndawo zibalaseleyo zokwamkela iindwendwe zaseQatar kwaye balandele iqela labo lesizwe buqu.
Amaxesha amane enkonzo yeveki eya eLuxor iqala nge-23 ka-Novemba ngo-2021, kwaye kabini ngeveki inkonzo eya eSharm El-Sheikh iqala nge-3 kaDisemba ngo-2021.
Iindlela ezintsha ziya kusebenza ngenqwelomoya iAirbus A320 kwaye ibonelele ngonxibelelwano olungenamthungo kwiindawo ezininzi zaseAsia, eYurophu, kuMbindi Mpuma nakuMntla Melika.
I-Qatar Airways iyakonyusa nenkonzo yayo eCairo ukuqala nge-1 Okthobha 2021, inyusa iinqwelomoya ukuya kwikomkhulu iphindwe kathathu mihla le.
I-Qatar Airways iyavuya ukwazisa ukuba izakuphehlelela inkonzo entsha eSharm El-Sheikh, e-Egypt nge-3 kaDisemba ngeenqwelo-moya eziphindwe kabini ngeveki, le ndlela intsha izakulandela ukuqala kwakhona kwemisebenzi eLuxor nge-23 kaNovemba ngeenqwelo moya ezine zeveki. Ekwandiseni ngakumbi iinkonzo ezise-Egypt, iQatar Airways iyakonyusa nenkonzo yayo eCairo ukuqala nge-1 Okthobha 2021, inyusa iinqwelomoya ukuya kwikomkhulu iphindwe kathathu mihla le.
Ukuqala kwakhona kwemisebenzi eLuxor nokumiliselwa kweenqwelomoya ukuya eSharm El-Sheikh ibona iQatar Airways ngoku isebenza ngenqwelomoya yeenqwelomoya ezingama-34 ngeveki eziya eYiputa. Isikhululo senqwelomoya saseHamad International Airport (HIA). Iinkonzo ezintsha ziya kuqhutywa yinqwelomoya yeAirbus A320, enezihlalo ezili-12 kwiklasi yokuQala nezihlalo ezili-132 kwiklasi yezoQoqosho.
Ukuqala kwakhona kwemisebenzi eLuxor kunye nokumiliselwa kweenqwelo moya kwi Umzobo El-Sheikh iyakwenza ukuba abakhweli babhabhe ukuya nokubuya kwezi ndawo bonwabele ukunxibelelana ngaphandle komthungo kwiindawo ezingaphezu kwe-140 eAsia, eYurophu, Middle East naseMelika. I-Qatar Airways ikwanemigaqo-nkqubo yokubhukisha eguquguqukayo enikezela utshintsho olungenamda kwimihla yokuhamba kunye neendawo, kunye nembuyekezo yasimahla kuwo onke amatikiti akhutshelwe ukhenketho agqitywe nge-31 Meyi 2022.
Ukwanda okuzayo kweenkonzo e-Egypt kuya kuqhubeka nokubonelela abalandeli bebhola base-Egypt iindlela zokuhamba ukuya kwiNdebe yeFIFA yeArabhu ye-2021 eQatar, bonwabele ezona ndawo zibalaseleyo zokwamkela iindwendwe zaseQatar kwaye balandele iqela labo lesizwe buqu. Itumente yokubonisa yommandla iya kuqhubeka ukusukela nge-30 kaNovemba ukuya kwi-18 kaDisemba ngo-2021.
Ishedyuli yokuhamba ngenqwelomoya-eLuxor: Ukuqala nge-23 kaNovemba
NgoLwesibini, uLwesine, uLwesihlanu nangoMgqibelo (onke amaxesha asekhaya)
Luxor (LXR) ukuya eDoha (DOH) QR1322 iyasuka: 12:10 ifika: 16:05
Ishedyuli yokuhamba ngenqwelomoya-uSharm El-Sheikh: Ukuqala nge-3 kaDisemba
NgoLwesibini nangoLwesihlanu (onke amaxesha endawo)
IDoha (DOH) ukuya eSharm El-Sheikh (SSH) QR1311 iyahamba: 09:00 ifika: 10:45
USharm El-Sheikh (SSH) ukuya eDoha (DOH) QR1312 iyahamba: 13: 15 ifika: 17:30